Ma ogtahay in KAWAANLE ama HILIBLE uu ahaan jiray saxiixa cusub ee Man City Nolito, HOOYADII xabsi la dhigay, Awoowihii soo korsadayna uu ahaan jiray!!….(Aqriso sheekadan CAJIIBKA ah) – Gool FM
Ma ogtahay in KAWAANLE ama HILIBLE uu ahaan jiray saxiixa cusub ee Man City Nolito, HOOYADII xabsi la dhigay, Awoowihii soo korsadayna uu ahaan jiray!!….(Aqriso sheekadan CAJIIBKA ah)
Byare July 1, 2016
(Manchester) 01 Luulyo 2016. kooxda Man City ayaa goor dhaweyd xaqiijisay in adduun dhan 13.8-milyan oo bound kula soo wareegtay xiddiga reer Spain ee Nolito.
Kooxda ku ciyaarta Etihad Stadium ayaa ka saxiixatay laacibkan ay kala soo wareegtay Celta Vigo heshiis afar sano ah.
Haddaba waxaan halkan kugu heynaa aqriste QISO CAJIIB ah in laacibku ahaan jiray Kawaanle, Waxaana loo geeyay awoowihii oo soo korsaday kaddib markii xabsiga la dhigay Hooyadii.
“Waxaa la ii keenay Awoowahey iyo Ayeeyadey, waxay iga caawiyeen inay wax I baraan, waxay iga bixiyeen wax kasta oo suuro gal ah oo ay ii awoodeen aniga,” Nolito ayaa sidaa yiri.
“Awoowahey wuxuu ii ahaa sida Aabahey wuxuuna ahaa qofkii ugu horreeyay ee i keena kubbadeyda cagta ee ugu horreysay.
Waa Nolito iyo awoowihii soo korsaday
“Dhiiro galin ayay dhab ahaan ii ahaayeen, maxaa yeelay markaad dib uga fikirto waqtiyadii adkaa adoo la bar-bar dhigaya nolosha iminka, aad ayay uga sahlan tahay nolosha.
“Arrinkaa darteed aad ayaan dhabtii ugu faanayaa waana uga mahad naqayaa wax kasta oo ay ii sameeyeen.
Nolito Awoowihii Manuel oo ahaa Kaluumeysato ayaa geeriyooday 2008-dii wixii markaa ka dambeeyay wuxuu u hibeyn jiray gool kasta oo uu dhaliyo.
Sheekada dhankeeda xiisaha badan ayaa ah in Nolito markii uu 15-jirka ahaa uu ahaan jiray Kawaanle ama Hilible waxaad ugu yeertaan inkastoo wareysiga aan iminka idin soo qoreyno uu ahaa waqti hore, wuxuu ahaa markii isaga iyo Morata la siinayay fursadoodii ugu horreysay ee xulka Spian waxayna ahayd kulan saaxiibtinimo ay la yeelanayeen Costa Rica sanadii la soo dhaafay.
Nolito ayaana ku bilaabay hadalkiisa mar uu waqtigaa u waramayay Marca: “Waxaan soo kici jiray sideeda iyo barka, waxaan ka shaqeyn jiray Dukaanka Hilibka laga soo bilaabo sagaalka ilaa galabka, waxaan tababarka ku sameyn jiray xaafadeyda.
“Waxaan ahaa 15-jir waxaana intaa kaddib u saxiixay kooxda Valencia.
“Wax HILIB ah ma jar-jari jirin maadaama midiyaha lagu gooyo Hilibka ay ahaayeen kuwa aad u Khatar ah.”.
Alexis Sanchez oo qarka u saaran inuu kooxdiisa u saxiixo heshiis cusub
DEG DEG: Liverpool oo loo soo gudbiyay dalabkii ugu horeeyay oo lagu doonayo Christian Benteke